မိတ်ကပ်မလိမ်းထားသလို ထင်ရတဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံရအောင် ပြင်တဲ့အခါ သိထားရမယ့် အချက် (၆)ချက် - For her Myanmar
မိတ်ကပ် လျှော့လိုက်ရင် ရပြီမလား.. လွယ်လွယ်လေးပါလို့တော့ မထင်စေချင်… 😛
မိတ်ကပ်တော့ အပြည့် လိမ်းထားပါရဲ့… ဒါပေမဲ့ ‘ဟင့်အင်း ငါကဒီနေ့ဘာဆိုဘာမှကို ပြင်မလာတာ’ ဆိုပြီး ဂျင်းတိုင်း အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူးနော်… မိတ်ကပ်ပါးပါးလေးနဲ့ ညက်ညက်လေးဖြစ်နေတာကို သဘောကျတယ် ဟုတ်? ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ပါးပါးညက်ညက် အရမ်းပေါ့ပါးတဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံက ခါတိုင်းပြင်နေကျ မိတ်ကပ်အထူကြီးတွေထက် ပြင်ရခက်တယ်ဆိုတာ ယုံကြမလားဟင်?
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီမိတ်ကပ်ပုံစံမှာ ကိုယ့်ပင်ကိုယ်အသားအရေကိုက ဒီလိုဝင်းဝင်းလေးနဲ့ အပြစ်အနာအဆာမရှိ လှနေတဲ့ပုံပေါက်အောင် ပြင်ရမှာ မဟုတ်လား 😛 ကဲ ဒါဆို ဒီလို ဂျင်းသိပ်ဖို့ အဲလေ.. သဘာဝအတိုင်း ညက်ညက်ပြောင်ပြောင်လေး လှနေဖို့ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို အရင်လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်…
(၁) ကိုယ့်အသားအရေကို တတ်နိုင်သလောက် ကောင်းအောင်ထားပါ။
တခြားမိတ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေမှာ အောက်ခံအသားအရေ ဘယ်လောက်ပဲ မကောင်းမကောင်း မိတ်ကပ်နဲ့ ဖုံးပစ်လိုက်တာမျိုး၊ အပြည့်အဝဖုံးပေးနိုင်တဲ့ မိတ်ကပ်သုံးလိုက်တာမျိုး လုပ်လိုက်လို့ရပေမဲ့ ဒီမိတ်ကပ်ပုံစံမှာတော့ တတ်နိုင်သလောက်မိတ်ကပ်ကို လျှော့ပြီးသုံးရမှာမို့ ကိုယ့်အသားအရေက အရမ်းသိသိသာသာဆိုးရွားနေရင် မိတ်ကပ်ကွက်သလို ဖြစ်သွားတတ်တာမို့ ရေများများသောက်၊ အသီးအရွက်များများစားပြီး ဝမ်းမချုပ်အောင် အစားအသောက်ဆင်ခြင်ရင်း အသားအရေကို ဂရုစိုက်ပေးရပါမယ် ယောင်းတို့ရေ…
(၂) မိတ်ကပ်အရည်ကို အသားအရောင်နဲ့ တစ်ထပ်တည်း ကျစေမယ့် အရောင်၊ အမျိုးအစားကိုရွေးပါ။
ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်။ ခါတိုင်းလည်း အသားအရောင်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတာ ရွေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ အခုက လုံးဝတစ်ထပ်တည်းအပြင် အရမ်းမထူတာရယ်၊ အစိုဓာတ်ကို အခြေခံထားတဲ့ (water based, oil based) အမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။
မိတ်ကပ်အရည် လိမ်းတဲ့အခါမှာလည်း မိတ်ကပ်ဖော့တုံးကို ရေလေးဆွတ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ပုတ်လိမ်းပေးပါ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာလည်း ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်ကို များများလေး စိုအိနေအောင် လိမ်းပေးပါ.. ဒါက အရေးကြီးတယ်နော်..
Related Article >>> မိတ်ကပ်ပုံစံကို လိုက်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့ အခြေခံ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး (၄)မျိုး
(၃) ကွန်ဆီလာကို လိမ်းဖြစ်အောင်လိမ်းပါ။
အနီကွက်တွေ၊ မျက်နှာက အမည်းစက်တွေနဲ့ အသိသာဆုံးဖြစ်တဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတွေကို ဖုံးဖို့က မိတ်ကပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ကွန်ဆီလာကို သုံးဖြစ်အောင် သုံးရမှာပါ။ ကွန်ဆီလာသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ပမာဏကို သုံးနေကျထက် လျှော့ပြီး အသားအရောင်ထက် တစ်ဆင့်ပဲဖြူတဲ့ အရောင်ကို သုံးရမှာပါ။ အထဲက အရည်ကလည်း မပျစ်မကျဲအနေအထား ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပြီး မိတ်ကပ်သားအရမ်းမထူတဲ့ အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်နေရပါမယ်။
(၄) ဖုန်ဖုန်ကြီးဖြစ်သွားစေမယ့် ပေါင်ဒါအမျိုးအစား မိတ်ကပ်ပစ္စည်းကို လုံးဝမသုံးပါနဲ့။
ဒီမိတ်ကပ်ပုံစံနဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ၁၂ နာရီလောက် လုံလုံလောက်လောက် အိပ်ထားပြီး ရေဓာတ်အပြည့်ရထားတဲ့ ကြည်လင်ရှင်းသန့်ပြီး တောက်တောက်ပပ အောက်ခံမျက်နှာအသားအရေကို ပြချင်တာလေ နော်.. ဒါကြောင့် မျက်နှာကို မိတ်ကပ်လိမ်းထားတာ သိသာစေတဲ့ ပေါင်ဒါအမျိုးအစား မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို မသုံးသင့်ပါဘူး ယောင်းရေ… ဥပမာ ပါးနီဆိုရင်လည်း ခရင်မ်၊ ဂျယ်လ်၊ အရည် စသည်ဖြင့် ညက်ညက်လေးဖြစ်စေမယ့် အမျိုးအစားကိုပဲ အစားထိုးသုံးသင့်ပါတယ်။
(၅) မျက်ခုံးကို ခဲနဲ့အများကြီးမဆွဲဘဲ ပုံသွင်းရုံလောက်ပဲ လုပ်ပါ။
ပုံမှန်မျက်ခုံးမွေးရှိတဲ့ ယောင်းတွေဆိုရင် တိတိကျကျကြီး ဆွဲနေတာမျိုးမလုပ်ဘဲ မျက်ခုံးခြစ်တံလေးနဲ့ ညီညီညာညာဖြစ်သွားအောင် ဖြီးလိုက်တာမျိုးလောက်ဆို အဆင်ပြေပါပြီ။ မျက်ခုံးမွေး မရှိတဲ့ ယောင်းတွေကတော့ ပေါင်ဒါလောက်နဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ဟိုခြစ် ဒီခြစ် လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီ။ မျက်ခုံးနည်းတူ မျက်တောင်ကိုလည်း ကော့ဆေးမသုံးဘဲ ကော့တဲ့စက်လောက်နဲ့ပဲ ကော့လိုက်ရင် ရပါပြီ။
Related Article >>> မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ နေ့တွေအတွက် မျက်နှာသန့်စင်နည်း အဆင့်ဆင့်
(၆) အရောင်တွေကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လျှော့ချပါ။
မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်လိမ်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်က သဘာဝ မျက်နှာလေးအတိုင်း ရအောင်၊ မိတ်ကပ် မပါသယောင် လိမ်းထားတာမဟုတ်လား… ဒီတော့ အမြင်အရ မိတ်ကပ်ကျတော့ နည်းနည်းလေး လိမ်းပြီး ရဲရဲတောက် နှုတ်ခမ်း၊ ကာလာစုံ မျက်လုံးနဲ့ဆို ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူးနော်.. အဲဒါကြောင့် ကိုယ်က မိတ်ကပ်ကို မရှိသလောက်ထိ ဖျော့ချလိုက်ပြီဆိုရင် တခြား တစ်မျက်နှာလုံးမှာရှိတဲ့ အရောင်တွေကိုလည်း လျှော့ချမှ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ သဘာဝမျက်နှာလေးနဲ့ အိုကေမှာ စိုပြည်မှာပေါ့။
အခုဆိုရင်တော့ သတိထားရမယ့် အချက်တွေကို လေ့လာပြီးတဲ့အပြင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့နည်းပါ ပါထားတယ်ဆိုတော့ ယောင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်..
Reference Links : stylecaster, glamour
မိတျကပျ လြှော့လိုကျရငျ ရပွီမလား.. လှယျလှယျလေးပါလို့တော့ မထငျစခေငျြ… 😛
မိတျကပျတော့ အပွညျ့ လိမျးထားပါရဲ့… ဒါပမေဲ့ ‘ဟငျ့အငျး ငါကဒီနဘေ့ာဆိုဘာမှကို ပွငျမလာတာ’ ဆိုပွီး ဂငျြးတိုငျး အောငျမွငျဖို့ဆိုတာ လှယျတဲ့ကိစ်စတော့ မဟုတျဘူးနျော… မိတျကပျပါးပါးလေးနဲ့ ညကျညကျလေးဖွဈနတောကို သဘောကတြယျ ဟုတျ? ဒါပမေဲ့ အဲဒီ ပါးပါးညကျညကျ အရမျးပေါ့ပါးတဲ့ မိတျကပျပုံစံက ခါတိုငျးပွငျနကြေ မိတျကပျအထူကွီးတှထေကျ ပွငျရခကျတယျဆိုတာ ယုံကွမလားဟငျ?
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီမိတျကပျပုံစံမှာ ကိုယျ့ပငျကိုယျအသားအရကေိုက ဒီလိုဝငျးဝငျးလေးနဲ့ အပွဈအနာအဆာမရှိ လှနတေဲ့ပုံပေါကျအောငျ ပွငျရမှာ မဟုတျလား 😛 ကဲ ဒါဆို ဒီလို ဂငျြးသိပျဖို့ အဲလေ.. သဘာဝအတိုငျး ညကျညကျပွောငျပွောငျလေး လှနဖေို့ သတိထားသငျ့တဲ့ အခကျြတှကေို အရငျလလေ့ာကွညျ့ကွမယျနျော…
(၁) ကိုယျ့အသားအရကေို တတျနိုငျသလောကျ ကောငျးအောငျထားပါ။
တခွားမိတျကပျအပွငျအဆငျတှမှော အောကျခံအသားအရေ ဘယျလောကျပဲ မကောငျးမကောငျး မိတျကပျနဲ့ ဖုံးပဈလိုကျတာမြိုး၊ အပွညျ့အဝဖုံးပေးနိုငျတဲ့ မိတျကပျသုံးလိုကျတာမြိုး လုပျလိုကျလို့ရပမေဲ့ ဒီမိတျကပျပုံစံမှာတော့ တတျနိုငျသလောကျမိတျကပျကို လြှော့ပွီးသုံးရမှာမို့ ကိုယျ့အသားအရကေ အရမျးသိသိသာသာဆိုးရှားနရေငျ မိတျကပျကှကျသလို ဖွဈသှားတတျတာမို့ ရမြေားမြားသောကျ၊ အသီးအရှကျမြားမြားစားပွီး ဝမျးမခြုပျအောငျ အစားအသောကျဆငျခွငျရငျး အသားအရကေို ဂရုစိုကျပေးရပါမယျ ယောငျးတို့ရေ…
(၂) မိတျကပျအရညျကို အသားအရောငျနဲ့ တဈထပျတညျး ကစြမေယျ့ အရောငျ၊ အမြိုးအစားကိုရှေးပါ။
ဖောငျဒေးရှငျးပေါ့နျော။ ခါတိုငျးလညျး အသားအရောငျနဲ့ တဈထပျတညျးကတြာ ရှေးရတယျဆိုပမေဲ့ အခုက လုံးဝတဈထပျတညျးအပွငျ အရမျးမထူတာရယျ၊ အစိုဓာတျကို အခွခေံထားတဲ့ (water based, oil based) အမြိုးအစားတှကေို ရှေးခယျြရပါမယျ။
မိတျကပျအရညျ လိမျးတဲ့အခါမှာလညျး မိတျကပျဖော့တုံးကို ရလေေးဆှတျပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပုတျလိမျးပေးပါ။ မိတျကပျမလိမျးခငျမှာလညျး ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျကို မြားမြားလေး စိုအိနအေောငျ လိမျးပေးပါ.. ဒါက အရေးကွီးတယျနျော..
Related Article >>> မိတျကပျပုံစံကို လိုကျပွီး ရှေးခယျြနိုငျစဖေို့ အခွခေံ မိတျကပျဖကျြဆေး (၄)မြိုး
(၃) ကှနျဆီလာကို လိမျးဖွဈအောငျလိမျးပါ။
အနီကှကျတှေ၊ မကျြနှာက အမညျးစကျတှနေဲ့ အသိသာဆုံးဖွဈတဲ့ မကျြကှငျးညိုတာတှကေို ဖုံးဖို့က မိတျကပျတဈခုတညျးနဲ့ အဆငျမပွပေါဘူး။ ကှနျဆီလာကို သုံးဖွဈအောငျ သုံးရမှာပါ။ ကှနျဆီလာသုံးတဲ့အခါမှာလညျး ပမာဏကို သုံးနကေထြကျ လြှော့ပွီး အသားအရောငျထကျ တဈဆငျ့ပဲဖွူတဲ့ အရောငျကို သုံးရမှာပါ။ အထဲက အရညျကလညျး မပဈြမကြဲအနအေထား ဖွဈနရေမှာဖွဈပွီး မိတျကပျသားအရမျးမထူတဲ့ အမြိုးအစားပဲ ဖွဈနရေပါမယျ။
(၄) ဖုနျဖုနျကွီးဖွဈသှားစမေယျ့ ပေါငျဒါအမြိုးအစား မိတျကပျပစ်စညျးကို လုံးဝမသုံးပါနဲ့။
ဒီမိတျကပျပုံစံနဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြက ၁၂ နာရီလောကျ လုံလုံလောကျလောကျ အိပျထားပွီး ရဓောတျအပွညျ့ရထားတဲ့ ကွညျလငျရှငျးသနျ့ပွီး တောကျတောကျပပ အောကျခံမကျြနှာအသားအရကေို ပွခငျြတာလေ နျော.. ဒါကွောငျ့ မကျြနှာကို မိတျကပျလိမျးထားတာ သိသာစတေဲ့ ပေါငျဒါအမြိုးအစား မိတျကပျပစ်စညျးတှကေို မသုံးသငျ့ပါဘူး ယောငျးရေ… ဥပမာ ပါးနီဆိုရငျလညျး ခရငျမျ၊ ဂယျြလျ၊ အရညျ စသညျဖွငျ့ ညကျညကျလေးဖွဈစမေယျ့ အမြိုးအစားကိုပဲ အစားထိုးသုံးသငျ့ပါတယျ။
(၅) မကျြခုံးကို ခဲနဲ့အမြားကွီးမဆှဲဘဲ ပုံသှငျးရုံလောကျပဲ လုပျပါ။
ပုံမှနျမကျြခုံးမှေးရှိတဲ့ ယောငျးတှဆေိုရငျ တိတိကကြကြွီး ဆှဲနတောမြိုးမလုပျဘဲ မကျြခုံးခွဈတံလေးနဲ့ ညီညီညာညာဖွဈသှားအောငျ ဖွီးလိုကျတာမြိုးလောကျဆို အဆငျပွပေါပွီ။ မကျြခုံးမှေး မရှိတဲ့ ယောငျးတှကေတော့ ပေါငျဒါလောကျနဲ့ နညျးနညျးပါးပါး ဟိုခွဈ ဒီခွဈ လုပျလိုကျရုံနဲ့ အဆငျပွပေါပွီ။ မကျြခုံးနညျးတူ မကျြတောငျကိုလညျး ကော့ဆေးမသုံးဘဲ ကော့တဲ့စကျလောကျနဲ့ပဲ ကော့လိုကျရငျ ရပါပွီ။
Related Article >>> မိတျကပျလိမျးတဲ့ နတှေ့အေတှကျ မကျြနှာသနျ့စငျနညျး အဆငျ့ဆငျ့
(၆) အရောငျတှကေို နညျးနိုငျသမြှနညျးအောငျ လြှော့ခပြါ။
မကျြနှာမှာ မိတျကပျလိမျးထားတယျဆိုပမေဲ့ ကိုယျက သဘာဝ မကျြနှာလေးအတိုငျး ရအောငျ၊ မိတျကပျ မပါသယောငျ လိမျးထားတာမဟုတျလား… ဒီတော့ အမွငျအရ မိတျကပျကတြော့ နညျးနညျးလေး လိမျးပွီး ရဲရဲတောကျ နှုတျခမျး၊ ကာလာစုံ မကျြလုံးနဲ့ဆို ဘယျလိုမှ အဆငျမပွပေါဘူးနျော.. အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျက မိတျကပျကို မရှိသလောကျထိ ဖြော့ခလြိုကျပွီဆိုရငျ တခွား တဈမကျြနှာလုံးမှာရှိတဲ့ အရောငျတှကေိုလညျး လြှော့ခမြှ ရပါလိမျ့မယျ။ ဒါမှ သဘာဝမကျြနှာလေးနဲ့ အိုကမှော စိုပွညျမှာပေါ့။
အခုဆိုရငျတော့ သတိထားရမယျ့ အခကျြတှကေို လလေ့ာပွီးတဲ့အပွငျ မိတျကပျလိမျးတဲ့နညျးပါ ပါထားတယျဆိုတော့ ယောငျးတို့အတှကျ အဆငျပွလေိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျနျော..
Tags: glow, Healthy, look, makeup, no makeup, skin